China Automatic Curtain Pleating Machine ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်းသူများ - Ridong Intelligent Equipment
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > ကုလားကာစက် > ကုလားကာ Pleating စက် > အလိုအလျောက်ကုလားကာ Pleating စက်
အလိုအလျောက်ကုလားကာ Pleating စက်
Automatic Curtain Pleating Machine သည်အဆင့်မြင့် pleated နည်းပညာကိုအသုံးပြုထားသည်။
1.6 * 1.3 * 1.5m
အဆင့်မြင့် Automatic Curtain Pleating Machine နည်းစနစ်များကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်၊ ကုလားကာများမှသည်ကုလားကာများမှသည်လေးလံသောကုလားကာများအထိနှစ်ဆနှင့်သုံးဆအသွားအလာများစွာကိုထုတ်လုပ်နိုင်သည်။
1. အဆင့်သတ်မှတ်ထားသောဗို့အား: 220V / 50HZ
2. အဆင့်သတ်မှတ်ထားသောပါဝါ: 1.3KW
3. ပါဝါလိုအပ်ချက်: 3-6KG / စတုရန်းမီတာ
4. အတိုင်းအတာ (L * W * H ကို): 1.6 * 1.3 * 1.5m
5. အလေးချိန်: 420KG
1.Automatic Curtain Pleating Machine တွင်အဆင့်မြင့်သည့် pinch pleating machine ပါ ၀ င်သည်။ pleating တွက်ချက်ခြင်း၊ စက်တပ်ခြင်း၊ pleat ခေါက်ခြင်း၊ ချိတ်အစာကျွေးခြင်း၊ အဆိုပါအသနားခံဖြစ်စေ spot- သို့မဟုတ် L- မှိုအားဖြင့်ပြီးဆုံးနိုင်ပါတယ်။
2.Automatic Curtain Pleating Machine သည်အမြင့်ဆုံး pleat-range 99, 99 မီတာ unpleated ထည်; Pleat အနည်းဆုံး pleat- အကွာအဝေး 75 မီလီမီတာ။ indexer သည်စက်အတွင်းရှိစက်များအားထိန်းချုပ်နိုင်စေရန်စက်အတွင်းရှိကုလားကာကိုချောမွေ့စွာကျွေးမွေးရန်သေချာစေသည်။ စဉ်ဆက်မပြတ်တင်းမာမှုကင်းသောကြောင့်အလွန်မြင့်မားသော၊ ယူနီဖောင်းနှင့်တသမတ်တည်းအသေအချာစမ်းသပ်မှုကိုရရှိသည်။
၃။ အလိုအလျောက် Curtain Pleating Machine ဖြင့် ၅၅၊ ၇၅၊ ၉၅ မီလီမီတာအတွင်းရှိအရည်အသွေးမြင့်ချိတ်များပါ ၀ င်သည့်နှစ်ဆသုံးဆခေါက်ကာပြားကိုထုတ်လုပ်ရန်ကြိုတင်စီစဉ်ထားသည်။ ကြီးမားသောချိတ်ကွန်တိန်နာ, 100 အထိချိတ်သိုလှောင်ပါသည်။
1. အလိုအလျောက်ကုလားကာ Pleating Machine သည်အသုံးပြုရလွယ်ကူစေရန်အဆင့်သုံး LCD LCD touch-screen ဖြင့်လွယ်ကူစွာလည်ပတ်နိုင်သည်။ စက်ကို ၅ လက်မ (၁၂၇ မီလီမီတာ) ဗားရှင်းတွင်လည်းရနိုင်သည်။ ခေတ်မီဆန်းပြားသောအလိုအလျောက်စနစ်ဖြင့်အမြင့်ဆုံးကျေနပ်မှုရပြီးအရည်အသွေးနှင့်တူညီနေသည်။
အဆင့်မြင့် pleating နည်းစနစ်များကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့် Curt Pleating Machine ကိုအလိုအလျောက်ပြုလုပ်နိူင်ပြီး၊ ကုလားကာများအနေဖြင့်ပိုက်ကွန်ကုလားထိုင်မှသည်လေးလံသောကုလားကာများအထိကျယ်ပြန့်သောကုလားကာများ၊ အများဆုံး2စင်တီမီတာနှင့်အတူတစ် ဦး ချုံ့အထူ device ကိုများအတွက်လုံးဝပြnoနာမဟုတ်ပါဘူး။
၃။ အလိုအလျောက်ကုလားကာပါးလွှာအောင်စက်သည်မိနစ်ထုတ်လုပ်မှုကိုအာမခံပါသည်။ 1, 800 လုံးဝချော pleats တစ်ရက်။ ဟုတ်ပါတယ်, pleats အားလုံးအရည်အသွေးမြင့်ချိန်ညှိကုလားကာချိတ်တပ်ဆင်နိုင်ပါတယ်။
အသုံးပြုသူအတွက်လွယ်ကူသောထိတွေ့မျက်နှာပြင်မျက်နှာပြင်သည်အော်ပရေတာအားစက်အားအမြင်အာရုံဖြင့်ပရိုဂရမ်ပြုရန်ခွင့်ပြုသည်။ အဆိုပါအော်ပရေတာ pleating နည်းစနစ်များလွန်းအတွေ့အကြုံရှိသည်ပါဘူး။
Automatic Curtain Machine မှ 5.The software သည်လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံးအတွက်အကူအညီဖြစ်သည်။
၆။ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးရှိမူပိုင်ခွင့်ပြုလုပ်ထားသောချုပ်ရိုးစနစ်သည်ပြီးဆုံးခြင်းတွင်အရည်အသွေးအမြင့်ဆုံးကိုအာမခံပေးသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ချုပ်ရိုး၌သင်နှစ်သက်သောနေရာတိုင်းတွင်ချုပ်ရိုးကိုနေရာချနိုင်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ ချဉ်ပေါင်နှင့်မီလီမီတာအနည်းငယ်ကွာဝေးသောချုပ်ရိုးတစ်ခုကိုစဉ်းစားကြည့်ပါ၊
- max ကိုအပ်အတွက်အအေး။ အမျိုးမျိုးသောပစ္စည်းများအတွက်စွမ်းဆောင်ရည်
- ရရှိနိုင်ချုပ်ပုံစံများ၏ကျယ်ပြန့် (optional ကို)
- ၁၇ မှ ၄၀ မီလီမီတာကြားတွင်ရှိသောတိမ်အနက်
- ၈၀ မှ ၁၈၀ မီလီမီတာကြားသာသာဝေးကွာသည်
- မက်စ်။ Pleating အရှည် 99.99m
အီရတ်၊ ဒူဘိုင်း၊ ကူဝိတ်၊ ကာဇက်စတန်၊ ပိုလန်၊ အင်္ဂလန်၊ Australiaစတြေးလျ၊ နယူးဇီလန်၊ ဘယ်လ်ဂျီယံ၊ စင်္ကာပူ၊ ထိုင်ဝမ်၊
1> စက်များကိုကောင်းမွန်စွာတပ်ဆင်ပြီးချိန်ညှိသည်။ ၎င်းသည်ပါဝါနှင့်ဖိအားကိုသာစတင်အလုပ်လုပ်သည်။
2> စက်အားလုံးသည်တစ်နှစ်အာမခံသက်တမ်းရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤအချိန်အတွင်းပုံမှန်မဟုတ်သောပျက်စီးခြင်းမှအပကျန်အစိတ်အပိုင်းများကိုအခမဲ့ဖြစ်သည်။
အခမဲ့> အာမခံကာလအတွင်းအသုံးပြုသူသည်နေရာတွင်အစားထိုးအစိတ်အပိုင်းများသို့မဟုတ်အလုပ်သမား ၀ န်ဆောင်မှုအတွက်ကုန်ကျစရိတ်ကိုပေးသင့်သည်။
5> Professional after sale ဌာနသည်သင့်အတွက် ၀ န်ဆောင်မှုပေးလိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဖောက်သည်လိုအပ်သလောက်နည်းပညာအထောက်အပံ့ကိုပေးမည်။
Hot Tags: အရောင်း၊ ၀ ယ်ခြင်း၊ စက်ရုံ၊ စိတ်တိုင်းကျ၊ အမှတ်တံဆိပ်၊ တာရှည်ခံ၊ အလိုအလျောက်ပြုလုပ်သော၊ ထုတ်လုပ်သူ၊ ရောင်းခြင်း၊ အသုံးပြုခြင်း၊ အရည်အသွေး၊ နောက်ဆုံးပေါ်ဝန်ဆောင်မှုနှင့်အမြန်နှုန်း၊ အမြန်နှုန်း၊ အမြန်နှုန်း၊ တရုတ်၊ , လျှော့စျေး, စျေးနိမ့်, လျှော့စျေး, စျေး, စျေးနှုန်း, စျေးနှုန်း, ယှဉ်ပြိုင်စျေး, CE, CCC, UL, ဖက်ရှင်, အဆင့်မြင့်, လွယ်ကူစွာထိန်းသိမ်း, နောက်ဆုံးရောင်းအား, တစ်နှစ်အာမခံ, တစ်နှစ်အရည်အသွေးအာမခံ, ပြီးနောက် - ဝန်ဆောင်မှုနှင့်အတူ , Classy, ​​ဖန်စီ, စုံစုံ
အလိုအလျောက် Pinch Pleater စက်
အသေးစားကုလားကာ Hemming စက်
အလိုအလျောက် Synchronous Hemming စက် Box ကို